Nhau - Kufis uye ngowani yemunamato
Kune varume, kupfeka kufi ndiyo yechipiri inonyanya kuzivikanwa chimiro chevaMuslim, uye yekutanga ndeye ndebvu. Sezvo Kufi chiri chipfeko chinozivisa chezvipfeko zveMuslim, zvinobatsira kuti murume wechiMuslim ave nemafifi akawanda kuitira kuti agokwanisa kupfeka rokwe idzva zuva riri rose. KuMuslim American, isu tine akati wandei ezvitaera zvaungasarudze kubva, anosanganisira akasiyana eakarukwa uye akarukwa heti dzeKufi. MaMuslim ekuAmerica mazhinji anoapfeka kutevera Muporofita Muhammad (ngaazorore murunyararo), uye vamwe vanopfeka kufi kuti vaonekere munzanga uye vazivikanwe sevaMuslim. Hazvina mhosva kuti chikonzero chako ndechei, isu tine masitayera akakodzera nguva dzese.
Chii chinonzi Kufi?
Kufis machira echinyakare uye echitendero chevarume vechiMuslim. Muporofita wedu anodiwa Muhammad (Rugare Ngaruve Kwaari) akajaira kufukidza musoro wake panguva dzakajairika uye panguva yekunamata. Mahadith mazhinji kubva kuvanyori vakasiyana anoratidza kushingaira kwaMuhammad mukufukidza musoro wake, kunyanya pakunamata. Anogara akapfeka kepesi ye<em>kufi nescarf mumusoro, uye zvinowanzonzi vamwe vake havasati vambomuona asina chaakavhara musoro.
Allah vanotiyeuchidza muKorani kuti: “Mutumwa waAllah zvirokwazvo anokupa muenzaniso wakanaka kwazvo. Chero ani zvake anotarisira kuva netariro muna Allah uye nemagumo, [uyo] anogara achirangarira Allah.” (33:21) Vadzidzi vakuru vazhinji Vese vanotora ndima iyi sechikonzero chekutevedzera maitiro eMuporofita Muhammad (Rugare Ngaruve Kwaari) uye kuita dzidziso dzake. Nokutevedzera mufambiro womuprofita wacho, tinogona kutarisira kuswedera pedyo nemararamiro ake tochenesa mararamiro edu. Chiito chekutevedzera chiito cherudo, uye avo vanoda Muporofita vacharopafadzwa naAllah. Nyanzvi dzine maonero akasiyana ekuti kuvhara musoro ihadith here kana kuti itsika. Dzimwe nyanzvi dzinoronga kuita kwemuporofita wedu watinoda seSunnah Ibada (tsika ine kukosha kwechitendero) uye Sunnat al-'ada (tsika inotungamirwa netsika). Nyanzvi dzinoti kana tikatevera nzira iyi, tinowana mubairo, ingava Sunnat Ibada kana Sunnat A'da.
MaKufi mangani akasiyana?
Kufis inosiyana netsika uye fashoni maitiro. Chaizvoizvo, chero hood inonyatsoenderana nemusoro uye isina brim inotambanudza kuvhara zuva inogona kunzi kufi. Dzimwe tsika dzinodaidza kuti topi kana kopi, uye dzimwe dzinodaidza kuti taqiyah kana tupi. Hazvina mhosva kuti unoidaidza kuti chii, chimiro chese chakafanana, kunyangwe heti yepamusoro ingangove nekushongedza uye yakadzama basa rekushongedza.
Ndeupi wakanakisa ruvara rweKufi?
Kunyangwe vanhu vazhinji vanosarudza nhema kufi dehenya caps, vamwe vanhu vanosarudza chena Kufis. Zvinonzi Muporofita Muhammad (Rugare Ngaruve Kwaari) anoda chena pane chimwe chinhu. Hapana muganhu kune ruvara, chero bedzi yakakodzera. Iwe uchaona Kufi Caps mune ese anobvira mavara.
Sei vaMuslim vachipfeka Kufi?
VaMuslim vanopfeka chiKufi zvikurukuru nemhaka yokuti vanoyemura mutumwa waMwari wokupedzisira nowokupedzisira—Muporofita Muhammad (maropafadzo norugare zvinobva kuna Jehovha) nezviito zvake. Munyika zhinji dzeAsia dzakadai seIndia, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Indonesia, neMalaysia, kufukidza musoro kunorangarirwa sechiratidzo choumwari nechitendero. Chimiro, ruvara uye chimiro cheMuslim headgear chinosiyana nyika nenyika. Shandisa mazita akasiyana kudaidza Kufi imwechete. MuIndonesia, vanoidana kuti Peci. MuIndia nePakistan, uko Urdu ndiwo mutauro mukuru wechiMuslim, vanoudaidza kuti Topi.
Tinovimba unonakidzwa nesarudzo yeMuslim America. Kana paine style yauri kutsvaga, ndapota tizivise.
Nguva yekutumira: Jun-03-2019
Ciput Hijab, Muslim Cap Black, Wool Kufi, Hijab Dupatta, Best Muslim Cap, Mens Mosque Hats,